FAQs | Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co, Ltd.
Unogamuchira tsika kugadzira?
Ehe. Isu tinoedza kupa uye kukudziridza gadziriso dzetsika dzakagadzirwa kumatambudziko ezuva nezuva ekugadzira mune mashoma magineti epasi uye Neodymium magineti masisitimu. Tsika yekugadzira inomiririra zvinopfuura makumi manomwe kubva muzana zvekutengesa kwedu.
Kwete. Chero huwandu hunogamuchirwa, asi mutengo unoda kugadziridzwa kuhuwandu hweodha yako, nekuti mutengo wekugadzira unosiyana muhuwandu. Hukuru huwandu hunokurudzirwa kuitira kuti udzikise mutengo wako uyezve mutengo.
Ndeapi mazwi ekubhadhara aunogamuchira?
Tinogona kugamuchira mubhadharo kuburikidza neT / T, L / C, Western Union, nezvimwewo mazwi ekubhadhara anogona kunge akasiyana kune akasiyana vatengi. Kune vatengi vatsva, kazhinji tinogamuchira 30% dhipoziti pamberi uye chiyero isati yatumirwa. Kune vatengi venguva refu, isu tinobvumidza mazwi ari nani, senge 30% dhipoziti pamberi uye chiyero kupokana neB / L kopi, 30% dhipoziti pamberi uye chiyero mushure mekugamuchira magineti, 100% kubhadhara mushure mekutumirwa, kana kunyangwe mazuva makumi matatu mushure mekugamuchira magineti.
Lead nguva dzinosiyana magnets uye magineti nehurongwa. Nguva yekutungamira ndeye mazuva 7-10 eNeodymium magineti sampling uye mazuva 15-20 emagineti system sampling. Zvekugadzirwa kwakawanda, iyo inotungamira nguva mazuva makumi maviri nemakumi matatu ezviwanzo zvepasi zvisingawanzoitika, uye mazuva makumi maviri neshanu nemashanu ezviitiko zvisingawanzo magineti epasi. Mamiriro ezvinhu anogona kuchinja, saka tinokurudzira kuti utarise nesu usati waisa odha, nekuti dzimwe nguva mamwe akajairwa maNeodymium magungano anogona kuwanikwa kungo-ing-inguva yekuendesa.
Unogona kutumira magineti kana zvigadzirwa zvemagineti kuburikidza nemhepo?
Ehe. Mendege, mune akawanda akakosha emagetsi mhando yemidziyo inova inoenderana nemagineti simba. Isu tinoshandisa yedu chaiyo yakarongedzwa kurongedza magineti simba kuti magineti atumirwe kuburikidza nemhepo zvakachengeteka.
Isu garandi zvinhu zvedu uye nekushanda. Kuzvipira kwedu ndekwe kugutsikana kwako nezvigadzirwa zvedu. Kunyangwe paine garandi kana kwete, itsika yekambani yedu kugadzirisa nekugadzirisa nyaya dzese dzevatengi kugutsikana kwemunhu wese.
Mari yekutumira inoenderana nenzira yaunosarudza kuwana zvinhu. Pasuo nesuo kutaura inowanzo kuve inokurumidza asi inodhura nzira. Seafreight ndiyo mhinduro yakanakisa yekutakura zvinhu. Tinogona kutaurisa chaiyo yekutakura mitengo kana iwe uchiraira iwo madhaidhi ehuwandu hwehuwandu, kwainoenda uye nzira yekutumira.
Ehe, isu tinogona kupa akawanda magwaro anosanganisira chigadzirwa kududzirwa, mushumo wekuongorora, RoHS, REACH, uye mamwe magwaro ekutumira pazvinodiwa.